कृषकको रोदनः एक दाना धान भित्राउन पाइएन, अब के खाने ? ( हेर्नुहोस भिडियो सहित) - Like For Nepal
कृषकको रोदनः एक दाना धान भित्राउन पाइएन, अब के खाने ? ( हेर्नुहोस भिडियो सहित)
यो पनि: कैलालीमा कर्णाली नदीको बाढी घरभित्र पसेर डुवान हुँदा एक जनाको मृ’त्यु भएको छ। टीकापुर नगरपालीका ८ कर्मीडाँडाका ८६ वर्षका कोकरवीरे ढोली मंगलबार राति आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा कर्णाली नदिमा पानीको बाहव बढ्न गई घरमा पानी पस्दा उनको मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घरमासँगै रहेका छोरा बुहारी भने सुरक्षित स्थानमा गएर बाँच्न सफल भएका थिए। विगत ५/६ वर्षदेखि प्या’रालाइसिसको बिरामी
भई हिँड्डुलसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका उनको डु’वानमा भाग्न नसकेर घरभित्रै मृ’त्यु भएको प्र’हरीले जनाएको छ।यस्तै,,उदयपुरमा खोलाले बगाएर हुलाक कार्यालयका कर्मचारीको मृ’त्यु भएको छ। बुधबार उदयपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ बस्ने ५९ वर्षीय कृष्णबहादुर श्रेष्ठको श’व फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्र’हरी नायब उपरीक्षक बेदप्रसाद गौतमले जानकारी दिए। उनको श’व बगाएको स्थानबाट अन्दाजी एक किलोमिटर तल ढुंगाको चेपमा अड्किएको अवस्थामा फेला परेको थियो।
प्र’हरीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पो’ष्टमा”र्टमको लागि जिल्ला अस्पताल उदयपुर पठाएको जानकारी दिएको छ। उनी अतिरिक्त हुलाक कार्यालय नरेटारका अतिरिक्त पत्र वाहक कर्मचारी हुन्। बुधबार बिहान उनको शव बैजनाथ खोलामा फेला परेको थियो। प्र’हरी नायब उपरीक्षक गौतमका अनुसार उनी मंगलबार साँझ ६ बजे महादेवस्थानस्थित घर फर्किँदै थिए। फर्किने क्रममा बैजनाथ खोलाले उनलाई बगाएको थियो।
Prevमहाकाली नदीमा फसेका मानिसको सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार
Nextबुहारी झु”ण्डिएको देखेपछि सासुले के गरिन ? १३ दिन सम्म अस्पतालबाट ला’स उठेन ( हेर्नुहोस भिडियो सहित)